Wararka Geo-engineering - AutoDesk, Bentley iyo Esri - Geofumadas
Juunyo, 2019 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, Microstation-Bentley
WAXYAABAHA KA QAYBGALAANSHAHA KA HORREEYA, INFRAWORKS AND CIVIL 3D 2020
Autodesk ayaa ku dhawaaqday furitaanka Revit, InfraWorks iyo Civil 3D 2020.
Iyadoo Revit 2020, isticmaalayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay sameeyaan dukumiintiyo qeexan oo faahfaahsan oo ku habboon ujeedada naqshadeynta, waxay isku xiraan xogta waxayna oggolaanayaan iskaashiga iyo bixinta mashruucyo dheellitiran. Waxay kaa caawin doontaa inaad yareyso waqtiga loo qoondeeyay hawlaha xasuusta waxayna ka qayb qaadan doontaa soo saarista shaqo tayo sare leh.
3D 2020 waxaa kale oo ay bixisaa horumarinta waxqabadka iyo miisaaman, kor u qaadka naqshadda BIM iyo waxtarka wax soosaarka, gaar ahaan mashaariicda waaweyn iyo kuwa culus. Nooca ugu dambeeyay waxaa ku jira qaababka cusub sida: Dynamo ee Madaniga 3D, oo hagaajin doona hawlaha dib-u-dhiska iyo ka caawinta isticmaalaha inuu helo nooc ka mid ah noocooda.
Iyadoo InfraWorks 2020, Autodesk waxay sii wadaysaa inay ka go'an tahay isdhexgalka BIM iyo GIS. Iskaashiga lala yeeshay Esri ayaa u oggolaaday inay ka faa'iidaystaan ​​xog badan oo GIS ah oo la heli karo si cad ama loo kaydiyo gudaha gudaha, iyada oo la adeegsanayo hab fudud oo laga hortago in badan oo ka mid ah isbeddeladii hore u dhacay. Noocani wuxuu ku darayaa awoodda lagu keydiyo macluumaadka InfraWorks ee loo sameeyey diiwaanka xogta Esri.
Esri wuxuu iibiyaa indoo.rs wuxuuna ku dhawaaqaa bilowga by ArcGIS gudaha
The February 28 2019, Esri, hogaamiyaha dunida ee sirdoonka goobta, ayaa ku dhawaaqay iibka ee gudaha GmbH, nidaamka meelaynta indoor hogaamiyaha technology oo caalami ah (IPS) xal.
Barnaamijka indoo.rs wuxuu noqonayaa qayb ka mid ah ArcGIS Indoors ee Esri, alaab cusub oo khariidad ah kaas oo u oggolaanaya qaabka gudaha ee isdhexgalka ee dhismayaasha shirkadaha, dukaamada, goobaha ganacsiga, garoomada diyaaradaha iyo kuwo kale. Sidoo kale, iibsigu wuxuu siin doonaa dadka isticmaala barnaamijka Esri ee ArcGIS oo leh adeegyo isku dhafan oo IPS ah si loogu taageero khariidadda gudaha iyo falanqaynta. Xarunta dhexe ee indoo.rs sidoo kale waxay u adeegi doontaa xarun cusub oo ah Esri R & D oo ku salaysan Vienna, Austria, oo diiradda saarey awoodda IPS ee kumbuyuutarka.
"Indoo.rs waa bixiyaha hoggaamineed ee adeegyada software iyo IPS, ururada adduunka oo dhan sida madaarada caalamiga ah, saldhigyada tareenka iyo xarunta ugu weyn ee shirkadaha ka shaqeeya, iyo Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhawaynaynaa shirkadda qoyska Esri ahay," ayuu yiri Brian Iskuday, Agaasimaha Adeegyada Mihnadaha ee Esri. "Technology, waayo-aragnimo iyo hogaaminta ee indoo.rs beerta IPS noqon doontaa lacagta weyn macaamiishayada oo doonaya in ay keenaan xoogga GIS u Bedadka hoose."
"Ka noqoshada qayb ka mid ah qaybaha wax soo saarka ee Esri wuxuu noo ogolaanayaa inaan sii wadno adeegyadeenna heer sare ah oo xirfadeed," ayuu yiri Bernd Gruber, oo ah aasaasaha shirkada indoo.rs. "
"Waxaan aragnay in suuqa IPS ayaa qarxay sannadihii la soo dhaafay," ayuu yiri Rainer Wolfsberger, CEO of indoo.rs, "iyo macaamiisha shirkadu waxay muujisay xiisaha badan ee is-dhexgalka qoto dheer la technology IPS, iyo faa'iidooyinka sidaas oo lacag la'aan ah ee xalkan heerarka kala duwan ee ururkaaga ".
Bentley Systems waxay ku maalgashaa Nidaamyada Biyaha Dijital ah si loo helo hababka kaabayaasha ah ee wax lagu kabo
Bentley Systems ayaa ku dhawaaqday maalgalin istiraatiiji ah oo ku wajahan Dukumiintiyada Dijital Biyaha, oo ah xal caalami ah iyo fikrado cusub oo laba mataano ah, oo loogu talagalay kaabayaasha farsamada gacanta.
Iskaashadaan waxay ka caawineysaa shirkadaha in ay sii ballaariyaan hoggaankooda, iyagoo keenaya xalal wanaagsan oo ah laba mataano ah oo loo isticmaalo kaabayaasha dhaqaalaha shirkadaha ama maalgashadayaasha ku jira adduunkoo dhan adduunka.
Shaqooyinka Biyaha Dijital ah waxaa loo yaqaanaa in lagu caawiyo biyaha iyo adeegsiga biyaha wabiya si ay u fuliyaan hannaan karti leh oo la jaan qaadi karo, jajaban oo dhammeystiran. Sida ku cad heshiiskan, shirkaddu waxay ujeedadeedu tahay inay hirgeliso codsiyada isdhexgalka ee u gaarka ah barnaamijyada ganacsiga (COTS), sida Bentley Systems 'OpenFlows iyo iTices offerings. Bentley Systems waxay si toos ah u siin doonaan ruqsadaha si toos ah macaamiisha Digital Water Works. Waxa kale oo aad xaq u leedahay inaad magacawdo laba agaasimood oo ka mid noqon doona Golaha Daabacaadda Dijital ah.
Munaasabadda, Paul F. Boulos, aasaasaha iyo Agaasimaha Boostada Dijital ah, ayaa yiri: "Waan ku faraxsanahay oo sharfay inaan helno maalgashigan istiraatiijiyadeed ee Bentley. Suite ee mataano digital waxyaabaha kaabayaasha waxaa lagu fulin doonaa in waji ka badan shan iyo toban bilood ee soo socda, iyo bisha soo socota ayaa bilaabaysa barnaamij carruur hore ee korontada ee shirkadaha biyaha iyo injineernimada daata oo doonaya in ay caawiyaan qorshaha ee naqshadeynta alaabta kadibna samee baaritaanka beta ee software-ka «.
Greg Bentley, CEO of Systems Bentley la wadaago: "maalgashiga ee Systems Bentley ee Digital Water Works, waxay ka dhigan tahay our aqoonsi in takhasusay hay'ad isdhexgalka digital door lagama maarmaan ciyaari doonaan si ay u caawiyaan milkiilayaasha kaabayaasha si loo kordhiyo iman kara ee laba mataano ah.
Marka la eego in ay waddo dhinaca horumarinta digital kaabayaasha yutiilitida tuubooyinka ee adduunka, ma noqon karaan qof kasta oo ka waxtar badan Dr. Paul Boulos in injineerada sare iyo shirkadaha injineernimada, iyada oo Digital Works Water si aanu u xaqiijino fursado aan xadidnayn oo mataano mataano ah ayaa hadda furmaya. "
Ka soo bixitaanka Joornaalka Geo-injineernimada -Junio ​​2019
Post Previous" Hore Wararka teknoolojiyada ee Geo-injineernimada - Juun 2019
Post Next Chronicle - FME World Tour BarcelonaNext »